PAPAYA (GEED QARAHA): SII KORDHAYA GURIGA KA SOO ABUUR - CAADI AHAAN
Koritaanka abuurka papaya
Geedka papaya qaraha wuxuu noqonayaa geedka caanka ah ee caanka ah, wuxuu qurxiyaa qolalka iyo meelaha bannaan ee la xiro ama balakoonada kuleylka iyo veranda. Geedkani waa mid madaxbannaan, sidaas darteed waa inuu daryeelaa iyo xaaladaha sii kordhaya waa inay noqdaan kuwo si joogta ah oo joogto ah loo raaco.
Shardiga ugu weyn ee papaya sii kordhaya ka dhagaxa waa abuur miro cusub. Midhaha ayaa la googooyaa, ka saar abuurka, lagu dhaqay biyo nadiif ah. Qiyaastii hal maalin, lafaha waxay u baahan yihiin in la qalajiyo, ka dibna tuuraan kuwa dhaawacan.
Diyaar garowga waxaa la samayn karaa. laba siyaabood:
Midka koowaad waa in la dhigo waxyaabaha ku jira qoyaanka qoyan (dhogorta) 12 saacadood oo daboolaya filim;
Midda labaad waa in la qoyo kiciyaha kobaca isla waqtigaas.
Abuurka beeraha waxaa la sameeyaa bisha Maarso. Waqtigaan, maalinta iftiinka wuxuu bilaabmaa inuu kordho, geedka wuxuu helaa qadarka loo baahan yahay iftiinka. Markaad beerato xilli kale, waa inaad bixisaa caymis dheeraad ah.
Waa muhiim! Iyadoo la'aanta iftiinka, geedku si xoog leh ayaa loo soo saaraa, ma fiicna, caleemaha iyo afkuna waxay noqdaan huruud, isku duub.
Awoodda ciidda iyo beeraha
Ka hor inta laga beerto papaya, isku dar ah ciidda ku haboon waa la diyaariyey: si loo sameeyo tan, isku daraan caleen iyo sod leh ciid, ciid iyo peat in ay u dhiganta is le'eg. Haddii aanay suurtagal ahayn in lagu diyaariyo ciidda adigaa iska leh, ciidda la iibsaday ee ficuska, oo lagu daray ciid, ayaa ku habboon. Sida weel, waxaad qaadan kartaa weel dherer ah, oo hoos ku xusan kaas oo ah dheecaan meesha la dhigo, tusaale ahaan, dhoobo dhoobo ah ama dhagaxyo.
Sidoo kale koraan dhirta kale ee qalaad: lychee, jujube, cananaaska, qajaarka-liin, kalluunka, dhererka.
Wixii beereedka qaadashada tiro badan oo ah miraha si ay u awoodaan inay doortaan geedaha ugu xoogan. Waxaa lagu beeray masruuf dhexdhexaad ah midba midka kale si qoto dheer ah 2 cm. Ka dib marka la sameeyo ka dib, boqolkiiba biqilka waa in uu sarreeyaa, sprouts muuqataa 12-15 maalmood.
Papaya waa degane ka mid ah kulaylaha, si loo fahmo sida ay u koraan abuurka at guriga waa mid fudud, ku filan si loo siiyo kuleyl, iftiin iyo qoyaan. Weelka dalagyada leh waxaa lagu daboolay dhalada, taas oo abuuraysa saameyn koronto ah. Xaqiiji dalagyada hawada illaa qiyaastii saacad maalin kasta, ka saarida galaaska. Caleemaha soo baxa waxaa lagu fadhiistaa dhir kala duwan.
Caleemaha si joogto ah u waraabiyo, laakiin qiyaas yar, si aanay u kicin rooti kallana. Waxa kale oo muhiim ah in laga hortago ciidda ka soo qalajinta. Warshad dhalinyaro ah waxay u baahan tahay iftiin, haddii ay jirto maqnaansho, nalal iftiin macquul ah ayaa la bixiyaa.
Daryeel dheeraad ah iyo shuruudaha loogu talagalay papaya sii koraya guriga
Papaya waa goobta dhalashada ee koonfurta Mexico, geedka sidoo kale wuxuu ku koray Waqooyiga iyo Bartamaha Ameerika. Dhulka woqooyiga ee dhulka u furan, dhirtu ma noolaan karto, sidaa daraadeed waa la koray oo kaliya qurxinta qolka.
Geedka waxaa loo baahan yahay in la bixiyo sida iftiinka badan ee suurtogalka ahdoorbididda qoraxda. Haddii aysan suurtagal ahayn, nalalka dhaadheer ayaa loo isticmaali karaa.
Waa muhiim! Masaafada u dhexeysa caleemaha iyo laydhku waa inay ahaadaan ugu yaraan 30 cm, haddii kale dhirta ayaa gubi doonta.
Geedka marwalba wuxuu u kala baxaa iftiinka, koritaanka labeenta waa in marmar loo rogaa dhinacyo kala duwan. Xilliga xagaaga, geedaha qaangaarka ah waxaa lagu go'aamiyaa balakoonka, si tartiib ah u adkaata.
Sida horey loogu soo sheegay, dhaqanka waa kulaylaha oo u baahan yahay diirimaad joogto ah, heerkul fiican oo heerkul ah + 18 ... + 24 ° C. hawada (balcony, loggia, santuuq).
Papaya waxay leedahay caleemo waaweyn, qoyaanka dushiisa sida ugu dhakhsaha badan ayaa uumi-baxa iyo qiyaasaha badan, sababtoo ah waraabinta loo baahan yahay maalin walba. Si loo ilaaliyo qoyaan badan, buufinta ayaa la qaadayaa. Qoyaanka xad-dhaafka ah waa mid aan loo baahnayn, sidaa darteed papaya guriga ku jira dheriga waa inay lahaadaan dheecaan wanaagsan iyo digsi daadi qoyaan badan. Marka cimilada qaboobaha, waraabinta waxaa la sameeyaa waxoogaa yar.
Geedku wuxuu bilaabmaa inuu nuugo laba toddobaad kadib marka ugu horeysa ee xubinta taranka. Samee muraayado dharka macdanta ah oo dhexdhexaad ah labadii toddobaadba mar, sida ku cad tilmaamaha bacriminta. Geedka ayaa si wanaagsan uga jawaabaya xeryaha dabiiciga ah: humus iyo digada. Inta lagu jiro ubax u baahan bacriminta fosfooraska-potassium, iyo koritaanka - nitrogen. Ha iloobin mulchka, doorka ugu fiican waa la jeexi karaa cawska, kaas oo aad ka heleyso qotodheer dabaq ah xagasha roobka.
Qeybaha yar yar, xididdadu waxay si dhaqso ah u koraan, buuxinta weelka oo dhan. Bisilis ayaa loo baahan yahay sannad kasta si koritaanku uusan u gaabin. Halkan waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto niyadjab daran oo ka yimaada nidaamka xididka geedka, xitaa waxyeelada yaryar ee u horseedda dhimasho. Iyadoo aan koritaanka transplantation hoos u dhigi doonaan, ma jiri doono ubax, waxaad illoobi kartaa fruiting. Weel kasta oo cusub inta lagu guda jiro xubinta taranka waa 8-10 cm ka weyn kan hore.
Waa muhiim! Dheriga weyn wuxuu ka hortagaa, sababtoo ah xididada ma haystaan ​​waqti ay ku daboolaan cawska ciidda, iyo marka waraabiyo waxaa jira halis ah kallana xidid. Awoodda wayn waxay ku habboon tahay gooyn xoog leh oo horumar leh.
Gowrida dhalmada Papa
Sida loo koro gooynta guriga papaya? Ujeedadaas awgeed, dhirta dhirta ee hal ama laba sano jirku waa 1.5 cm oo dherer ah, waxay gooyeen dherer 10 cm, jarida caleemaha oo dhan, oo la qalajiyey ilaa saddex maalmood: waa inaysan lahayn wax badan oo casiir ah, meesha gooyana waxay sii kori doontaa wakhtigan iyo bakteeriya
Markaas rooting waxaa lagu beeray weel leh ciid qoyan oo qoyan ama peat, qoto dheer oo qoto dheer oo ku saabsan 3 cm. Ku daboolka jarida cutubka dhalada ah, xidididu ma dhici doonto iyada oo aan lahayn saamiga aqalka dhirta lagu koriyo. Qalinka ugu horeeya waxaa lagu sameeyaa weel 2-3 xabbo ka badan kii hore.
Mustaqbalka, xannaanadu way ka duwan tahay shuruudaha xabsiga ee sheyga dadka waaweyn.
Iyadoo caawinta guntooda sidoo kale faafin: thuja, canab, ruxin, laurel, chrysanthemum, petunia, clematis, Brugmania, plumeria.
Waa maxay calaamadaha iyo cayayaanka?
Papayas, marka ay guriga ku koraan, waxay u nugul yahiin cayayaanka iyo cudurada, laakiin waxay kaloo dhaawici karaan geedka. Caarada caarada iyo aphid waa halis sababtoo ah waxay nuugaan dheecaanka geedka, burburinta caleenta caws iyo caws, iyagoo ka tegaya carruurtooda. Si loola dagaallamo, daroogooyinka xakamaynta cayayaanka, sida "Aktellik", "Antiklesch", bayoolajiga - "Akarin" iyo "Fitoverm" ayaa loo isticmaalaa. Siyaabaha caanka ah waxay ka caawiyaan buufinta biyaha saabuunta ah, decoctions ee yarrow ama toon.
Cudurada ugu caansan waa caarada budada ah, sababaha - qoyaan sare ama qabow. Ka hortagga wuxuu u adeegi doonaa heerkulka heerkulka adag, xakamaynta waraabinta (isku mid ayaa ku habboon caleemaha rootka). Si loola dagaallamo jeexjeexka budada ah, taas oo muujinaysa qaabka caarada cad, waa mid wax ku ool ah oo leh caawimaadda naxaasta sulfate ama baaruud kolloid ah. Diyaargarowga fangasaska "Hom", "Kuprozan", "Vitaros" ayaa ka caawiya sidii looga hortagi lahaa cudurka. Noocyada dadweynaha ee halganka: xalinta sabuun-xalalka, xal ash, xalal casaan oo casri ah ee kiriimiga iyo dib udajinta basasha ama toonta.
Ma taqaanaa? Marka la eego mid ka mid ah qaybaha "Indiana Jones", Harrison Ford wuxuu ku daaweyn jiray hernia ciriiriga ah oo leh papain irbad. Mucjisadan cirifka kuleylaha waxay tahay dib-u-hagaajin iyo wakiil daweyn.
Mashruucu ma soo saaraa guriga?
Papaya Fruiting at home waa arrin muran leh: sida laga soo xigtay qaar ka mid ah xogta, miraha dayrta, ma haysato waqti si ay u bislaadaan, sida ku cad dib u eegista kale si guul leh u daadi. Beeraha Plant, kuwaas oo nasiib ku filan si ay u cunaan miraha dhirta, ku adkeyso xaaladaha ku habboon ee daryeelka iyo dayactirka, markaas doonista noqonayaa suurto gal. Ubaxa ugu horeeya wuxuu dhacaa 10-11 bilood laga bilaabo beeritaanka, kadibna dabiici ahaan, miraha way muuqdaan.
Ma taqaanaa? Indiyaanka Maraykanka ayaa isticmaala cabitaanka miro si ay u jilcaan hilibka hore ama adag. Wax yar oo xiiso leh waa in lala xiriiro cabitaan joogto ah oo joogto ah oo casiir ah, faraha faraha ayaa si tartiib ah looga tirtirayaa.
Papayas ayaa loo jecel yahay alaabooyinka faa'iido leh, oo loo isticmaalo wax soo saarka cuntada, fiitamiin, iyo sidii tallaabo looga hortagi lahaa cudurrada qaarkood, tusaale ahaan, ifilo iyo qabow. Miro iyo casiir ayaa loo isticmaalaa kondomoole, iyada oo qayb ka ah alaabta daryeelka maqaarka ee wejiga, qoorta iyo gacmaha, iyo timaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Caadi ahaan 2019